काठमाडौमा थपिए १५ सय ३५ जना कोरोना संक्रमित, आइतबार ३३ सय ३६ जनाले जीते कोरोना « Etajakhabar
काठमाडौमा थपिए १५ सय ३५ जना कोरोना संक्रमित, आइतबार ३३ सय ३६ जनाले जीते कोरोना
काठमाडौ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १५ सय ३५ जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन् । ६२९ महिला र ९०६ पुरुष गरी जम्मा १५ सय ३५ जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालय प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १ लाख ५८ हजार ८९ पुगेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकाका १५ सय ३५ जनासहित २८ सय ५६ जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या १ लाख ५८ हजार ८९ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
४५ हजार ५७२ कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन् । यस्तै मन्त्रालयका अनुसार आइसोलेसनमा ४५ हजार ५७२ जना छन् भने क्वारेन्टाइनमा ३हजार ६४ जना रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा १२ हजार ३११ नमूनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ ।
आइतबार ३३ सय ३६ जनाले कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या १ लाख ८ हजार ३३४ पुगेको छ । आइसीयूमा २७७ जना र ६६ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नेपालमा कोरोनाबाट ८४७ जनाको मृत्यु भएको छ । आइतबार ५ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।